January 23, 2021 - Khitalin Media
မင်္ဂလာဦးညအတွက် အပျိုစင်သတို့သမီးလေးတွေ ကြိုတင်သိထားရမယ့်အချက်များ…
January 23, 2021 by Khitalin Media
ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျန်းမာသွယ်လျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်လူသိများကျော်ကြားပါတယ်။တကယ်တော့ သူတို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့လိုဖြစ်နေတဲ့အလေ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေကြောင့်ကျန်းမာသွယ်လျပြီးချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ဂျပန်မလေးနဲ့တူလိုက်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာဓလေ့ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး မနက်အိပ်ရာထထချင်း ဘာအစာမှမစားရသေးခင် ရေသောက်ခြင်းအလေ့အထပါပဲ မနက်အိပ်ရာထချိန်ရေသောက်ဖို့ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရဝရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရေဓာတ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့လန်းဆန်းတက်ကြွနေစေဖို့ရယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အားအင်တွေကို ရေဓာတ်ကနေရရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုကြာရှည်စွာခံစားရပါကအဝလွန်ရောဂါ၊ရင်သားကင်ဆာရောဂါ၊ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါ၊အူမရောင်နာရောဂါ၊သားအိမ်ကင်ဆာ၊ဆီးကျောက်တည်ခြင်း၊နှလုံးအောင့်ရောဂါ၊အစာမကြေခြင်းစတဲ့ ရောဂါဝေဒနာပေါင်းစုံကိုခံစားရနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်မနက်အိပ်ရာထချိန် ရေသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရရှိစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမနက်အိပ်ရာထချိန် ရေသောက်တဲ့အခါအစာအိမ်ထဲမှာဘာအစာမှရှိမနေစေရပါဘူး။အဲဒီအခြေအနေမှာ ရေသောက်ခြင်းကြောင့် အောက်ပါ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်အတောက်ကင်းခြင်း အဲဒီလိုမနက်အိပ်ရာထထချင်းအစာအိမ်ထဲမှာအစာမရှိချိန်ရေသောက်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအူမကြီးကိုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေပါတယ်။ညဘက်အိပ်ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို အစာမရှိချိန်မနက်အိပ်ရာထထချင်း ရေကိုလုံလောက်အောင်သောက်ပေးခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်ကင်းစေပြီးလန်းဆန်းမှုနဲ့ကျန်းမာမှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ် ဒါ့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကြွက်သားဆဲလ်တွေနဲ့သွေးဆဲလ်အသစ်တွေထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း မြင့်တက်စေပါတယ်။ အသားအရေကြည်လင်ချောမွေ့ခြင်း ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုက အရေပြားမှာအမည်းစက်နဲ့အရေးအကြောင်းတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မနက်အိပ်ရာထချိန် ဗိုက်ထဲအစာမရှိချိန် ရေ၅ဝဝမီလီဂရမ်ရအောင်သောက်ပေးခြင်းက သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပြီးအသားအရေကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး ရေဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်ကင်းစင်ပြီး အသားအရေလှပလာပါလိမ့်မယ်။ ကျောက်ကပ်အနည်ထိုင်ခြင်းနှင့် ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်း နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးကတော့ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ကျောက်ကပ်အနည်ထိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ မနက်အိပ်ရာထထချိင်းအစာအိမ်တွင်းအစာမရှိချိန် ရေသောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်အစာအိမ်ကနေအက်ဆစ်ထွက်မှုကိုလျော့နည်းသက်သာစေပြီး ကျောက်ကပ်မှာအနည်ထိုင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆီးအိမ်ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျမှုကိုပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်ရှိသင့်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုမနက်အိပ်ရာထတာနဲ့အစာအိမ်ထဲအစာမရှိချိန် ရေသောက်ပေးခြင်းကြောင့် အစာချေစနစ်ကိုတိုးတက်စေပြီး ဆာလောင်မှုကိုခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။ … Read more
သားဦးစနေ မီးလို မွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား?တကယ်လား
သားဦးစနေ မီးလို မွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား?တကယ်လား..? သားဦးစနေမွေးရင်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ လူတွေအတွက် စနေသားသမီးဟာ ဒုတိယဘုန်းကံအကြီးဆုံး စနေသားဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော် တဲ့မိဘတွေ စောစောသေကုန်ကြလေရဲ့ စနေနေ့မရှိခဲ့ရင် ရတနာ၃ပါးလည်း လောကမှာ မရှိနိုင်တော့ဘူး စနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီးရတနာ ၃ ပါးစုံတဲ့ ရတနာအခါတော်နေ့ပဲ။ စနေနေ့ဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ဓမ္မစက်စတည်တဲ့နေစနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ်တဲ့နေ့ ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ စပေါ်သည် …။ တရားရတနာနဲ့ သံဃာရတနာကတော့ စနေနေ့မှာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄၇ ရတနာ ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့ စပေါ်ရပါတယ် …။ ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာကိုကောက်လည်း ၄၇၇ပဲနော်။ စနေနေ့မရှိပဲ တရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလ ည်းမရှိနိုင် … Read more
မိန်းမကိုနိုင်ကြောင်း သက်သေပြချင်မိခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရဲ့အဆုံးသတ်…
အိမ်ထောင်တစ်စုမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားက မိသားစုကို ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ အပြင်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း နေ့တိုင်းပိုက်ဆံရှာ ထွက်ရပေမယ့် အဝတ်လျှော်၊ သန့်ရှင်းရေး ၊ အစားအသောက်ပိုင်း စတဲ့ အိမ်မှု့ကိစ္စအဝဝကိုတော့ အိမ်ရှင်မဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကဘဲ ဒိုင်ခံခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီး ဖြေရှင်းကြရတာပါ။ အဲ့လို ကိစ္စအဝဝတွေကို ဖြေရှင်းနေရခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ ပင်ပန်းလာရင် စိတ်ဆတ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်လည်း အဝတ်လျှော်ရင်း စိတ်မကြည်နေပုံရတဲ့ ဇနီးသည်ကို နိုင်ကြောင်း သက်သေပြချင်လွန်းလို့ သွားစနောက်မိ လိုက်တဲ့ အမျိုးသားရဲ့အဖြစ်ကတော့ အဆုံးသတ်မလှခဲ့ရပါဘူး။ အစအနောက်သန်တဲ့ခင်ပွန်း နဲ့ စိတ်ဆတ်တတ်လွန်းတဲ့ဇနီးတို့ တစ်အိမ်တည်းအတူတူနေဖို့ ကံဇာတာပါလာပုံပါဘဲလေ။ Mia (Mckzone Daily) Unicode အိမျထောငျတဈစုမှာ အိမျထောငျဦးစီးဖွဈတဲ့အမြိုးသားက မိသားစုကို ထောကျပံ့နိုငျဖို့ အပွငျမှာ အလုပျလုပျရငျး နတေို့ငျးပိုကျဆံရှာ ထှကျရပမေယျ့ အဝတျလြှျော၊ သနျ့ရှငျးရေး ၊ အစားအသောကျပိုငျး စတဲ့ … Read more
ကိုယ်ခုလက်ရှိတွဲနေတဲ့ ကောင်လေးက အခုဖော်ပြပေးမယ့် မေးခွန်းလေးတွေ မေးဖူးတယ် ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားလို့ပါပဲ။ ကောင်လေးတွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော် ချစ်သူ မိန်းကလေးကို ဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေ မေးထားသင့် ပါတယ်။ (၁) တွဲလာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးဘာခံစားမိလဲ ကောင်လေးအများစု မေးတတ်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးပါပဲ။ အထူးသဖြင့် သင့်ကို လက်တွဲဖော်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူက လေးလေးနက်နက်မေးတတ်ပါတယ်။ သင်နဲ့ချစ်သူရည်းစားဖြစ်တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံး အချစ်ကို ဘယ်လိုခံစားမိလဲ ဆိုတာကို sharing လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချစ်သူအဖြစ် တွဲလာတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ သူ့ကြောင့် အချစ်ကို ဘယ်လို ခံစားမိတယ်၊ ပျော်ရွှင်ရတာများလား၊ ပြဿနာတွေများခဲ့လားဆိုတာကို သုံးသပ်ပြီး အမှားများကို ပြင်ဆင်ဖို့ အသင့်ရှိနေသူတွေက ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး မေးတတ်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ကို တကယ်ချစ်လို့သာ မေးတာပါ။ (၂) … Read more
မိန်းမကိုယ် ဘာလို့ယားလဲ…ပျောက်အောင် ဘယ်လိုကုနိုင်မလဲ…
ဘရာမ၀တ်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းပြီး ရင်သားကိုလည်း ပိုလှစေကြောင်းတွေ့ရှိ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အမျိုးသမီးဝတ်ဘရာတွေ ရှိနေခဲ့တာပါ။ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ အကြိုက်နဲ့ ခေတ်ကိုလိုက်ပြီး ပုံစံမတူကွဲပြားတာမျိုးတော့ရှိပြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်း ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ဖို့ ဘရာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေအမြင်အရ ဘရာမဝတ်ဘဲနေဖို့ကို လက်ခံဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် ဘရာမဝတ်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ ဒီအချက်တွေက သက်သေပြနေပါတယ်။ (၁) သွေးလှည့်ပတ်မှုပိုကောင်းမယ် စိတ်လွတ်လပ်အောင်လို့ဆိုပြီး အဝတ်အစားကိုပွပွချောင်ချောင်ဝတ်ပေမယ့် ဘရာကိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွက်တိဖြစ်တာကိုပဲဝတ်ကြပါတယ်။ အဝတ်အစားကို ဘယ်လောက်ပဲပွတာချောင်တာဝတ်ပါစေ၊ ဘရာက ကြပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက သွေးကြောတွေကို ဖိထားသလိုဖြစ်စေတာကြောင့် သွေးလှည့်ပတ်မှုအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘရာမဝတ်ဘဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သွေးကြောတွေက သဘာဝအတိုင်းပွင့်သွားပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေတာကြောင့် ဦးနှောက်ဆီ အောက်စီဂျင်ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ (၂) ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်မယ် အိပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဘရာကိုချွတ်ပြီးအိပ်တာက သွေးဖိအားကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်က သက်တောင့်သက်သာရှိတာမို့ ကောင်းကောင်းလည်း အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ (၃) … Read more
ဝက်သားဒုတ်ထိုး ကြိုက်သူတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားဗျို့
ဆရာဝန်ညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဆေးခန်းကိုလာပြတာ အသက် ၂၀ ကျော်ကောင်ကလေး၊ သူ့စအိုကနေ ( intestinal fluke လို့ခေါ်တဲ့ )အကောင်အရှင်လေးတွေ ထွက်ထွက်နေတာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ ၃-၄ နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့…။ သတိထားမိတာတော့ အဲဒီမတိုင်ခင် ဝက်သားတုတ်ထိုးတွေ အတော်စားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီအကောင်လေးတွေသာ အသည်းထဲမှာတွယ်ကပ်မိရင် အတော်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခပေးတော့မှာ။ ဒီလပိုင်း/နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဆေးရုံမှာလည်းမကြာခဏတွေ့လာရတာတွေက အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်လူနာတွေ အစာအိမ်ကင်ဆာ အူမကြီးကင်ဆာတွေနဲ့၊ တစ်ချို့ဆိုရင် ခွဲလို့မရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမို့ အသက် ၃၀ ကျော်လေးမှာပဲ သေမင်းရက်ချိန်းကို ထိုင်စောင့်နေရတဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်လို့။ အဲဒီလိုလူနာတွေကို တွေ့ရ မြင်ရ ကြားရတိုင်း လမ်းဘေးမှာ မကျက်တကျက်ပြုတ်တွေထိုင်စားနေတဲ့ တုတ်ထိုးဆိုင်တွေ ၊ မကျက်တကျက်ကင်တဲ့အပြင် မီးခိုးငွေ့တွေ ညှော်ငွေ့တွေပါရိုက်ထားတဲ့ အကင်ဆိုင်တွေနဲ့ တစ်ခါတလေ ခေါင်းထဲ ဗိုက်ထဲက သွေးတွေတောင်ထွက်လာတတ်သေးတဲ့ငါးကင်တွေ… နောက်တစ်ခါ ဆိုင်ကြီးကနားကြီးတွေနဲ့ရောင်းပြီး ဈေးကြီးပေးစားရတဲ့ … Read more
“ယောက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေးတစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး”
အဲ့ဒီ ယောက်ျားကို ချစ်နေသေးတဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ ဘဝ ပျက်စီးသွားမှာပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အယုံကြည်လွယ်တယ်. ခံစားရ လွယ်တယ် အားနာလွယ်တယ်.. အစွဲ လမ်းကြီးတတ်တယ် ဆိုရင် နောင်တတွေ နဲ့ အလိမ် အညာတွေပဲ ခဏခဏခံနေရမှာပေါ့ဖောက်ပြန် တတ်တဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်ပြီး ရှေ့ဆက် လက်မတွဲပါနဲ့. အနေနီးမှုကို မလွန် ဆန်နိုင်ပဲ ဖောက်ပြန် တာဟာအချစ်ကို ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ဘူးေ ယာက်ျားတစ်ယောက် ထားသွားခံရလို့ မိန်ကလေး တစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူးမွေးရာပါ ဆင်ခြင်တုံ တရား အားနည်းတာ. စာရိတ္တသက်လုံ မကောင်း ခဲ့တာ ပါပြော ချင်တာက. ဆန္ဒနဲ့ သိက္ခာကို ရွေးချယ်ရ တဲ့ အခါ သိက္ခာကိုသာ ဦးစားပေးပါ လိုချင်တာနဲ့ … Read more